WH – Mood for Movies
Heath Ledger တစ်ယောက် America မြေပေါ်ကို စခြေချတော့ သူစတွေ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူတွေထဲမှာ Steve Alexander လည်းပါတယ်။ Steve Alexander က နောက်ပိုင်းမှာ Heath ရဲ့manager ဖြစ်လာသလို အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီ့ညက သူတို့နှစ်ယောက်က ကားတစ်စီးပေါ်မှာ။ Steve Alexander က သူ့client ဖြစ်တဲ့ Heath ကို သရုပ်ဆောင်သက်တမ်းဘယ်လောက် ရှိပြီလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ Heath က သေချာစဉ်းစားပြီးတော့ အနှစ် ၂၀ လောက်ရှိပြီလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီ့တော့ Steve Alexander က ရယ်ရယ်မောမောနဲ့မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြ
Nights of Cabiria ဇာတ်ကားကို အီတာလျံ Director ကြီး Federico Fellini က သူ့နာမည်ကျော်ဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ La Dolce Vita တို့8½ တို့မတိုင်ခင်က ရိုက်ကူးခဲ့တာ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် La Dolce Vita မရိုက်ခင် ၃ နှစ်အလိုခန့်က။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်လောကမှာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဇာတ်ညွှန်းဆရာဘဝနဲ့အမြစ်တွယ်နေခဲ့တဲ့ Fellini အတွက်တော့ သူ့ဘဝရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်ကူးခင်ကတည်းက အခုလို Nights of Cabiria လို ဇာတ်ကားမျိုးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတွေ ဖန်တီးနေပြီးနှင့်နေပြီ။ . အမှန်က အခုဇာတ်ကားဖြစ်လာအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တာ လွယ
ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ ဘာအကြောင်းအရာလည်းဆိုတာ ကြိုမသိခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်တော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အဖွင့်ဇာတ်ဝင်ခန်းဟာ အံ့ဩမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းကို ပြနေလဲဆိုတာကိုလည်း တွေးနေမိလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ထိုဇာတ်ဝင်ခန်းရဲ့ တင်ပြမှုစွမ်းရည်ကြောင့်လည်း မျက်တောင်မခတ်ပဲ ကြည့်ဖြစ်ချင် ကြည့်ဖြစ်နေမိလိမ့်မယ်။ . သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ လက်အစုံကို ကျွန်တော်တို့ လိုက်ကြည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေက သူ့လက် လှုပ်ရှားမှုတွေကနေ ခွါမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ငြိမ်သက်စွာလဲလှောင်းနေတဲ့ အသက်မဲ့ခန္ဓ
အဖွားကြီးတစ်ယောက် Howard တို့ရုံးကို ဝင်လာတယ်။ Mary က ထိုအဖွားကြီးကို Howard ရဲ့ စားပွဲရှေ့အထိ ခေါ်လာပေးတယ်။ Howard ဆိုအတော်ကို အသက်ကြီးနေပြီ။ Mary လည်း ဘာထူးလဲ။ သူမလည်း အသက်အတော်အသင့် ရနေပြီ။ ခုနက အဖွားကြီးက သူမကိုယ်သူမ Clementine Kruczynski လို့ မိတ်ဆက်တယ်။ Howard နဲ့ Mary က တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် လှမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ ထို့နောက် Howard က သူတို့အခု conversation ကို recording လုပ်မဲ့အကြောင်းကို ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ Howard က သူ့ computer ကို ဖွင့်ပြီး Clementine ရဲ့ file ကိုဖတ်နေတယ်။ နှစ် ၅၀
ပြီးခဲ့တဲ့ May လလယ်လောက်က ပြင်သစ်နိုင်ငံ Cannes မြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ 71st နှစ်မြောက် Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပခဲ့တယ်။ ထိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ အကြီးမားဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ Palme d'Or ဆုကို ဂျပန်နိုင်ငံက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကား ဖြစ်တဲ့ Shoplifters ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားက ဆွတ်ခူးသွားတယ်။ ဒီမှာတင် ကမ္ဘာအနှံ့က ရုပ်ရှင်ချစ်သူတိုင်းက ထိုဇာတ်ကားကို အာရုံစိုက်လာကြတယ်။ ဒါနဲ့ဒီဇာတ်ကားကို လူတိုင်းသိသွားကြပြီး အခုလည်း အကယ်ဒမီပေးပွဲအတွက် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြော ရုပ်ရှင်စာရင်းမှာ လျာထားခံနေရတဲ့အထိ အောင်မြင်မှုတ
Roma က ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆိုတာထက် ပိုခဲ့တယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဆိုတာ ဇာတ်လမ်းနဲ့ချည်းပဲ မသက်ဆိုင်ဘူး။ ထိုဇာတ်လမ်းကို ဘယ်လိုတင်ပြသလဲဆိုတာရယ်၊ သူတို့တင်ပြချက်ကို ပရိသတ်က ဘယ်လိုယူခဲ့သလဲဆိုတာ တွေအပေါ် အများကြီးမူတည်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဟာ ကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ Cold War မှာ Paweł Pawlikowski က ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကို သူ့မိဘနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတွေကို ပြန်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Alfonso Cuarón ကတော့ Roma နဲ့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကို သူ့ရဲ့ကလေးဘဝဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ သူ့ငယ်စဉ်က
Lessons Learned Disney ရဲ့ယခုနှစ်ထွက်ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို ကျွန်တော် အလေးထားပြီး ကြည့်မိခဲ့တယ်။ ဟိုတလောတုန်းကလည်း Zootopia ဇာတ်ကားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ယူခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာလေးတွေအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့ဖူးပါပြီ။ ယခုလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲ Jungle Book (2016) ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကူးထဲကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ အတွေးစလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ခန်းစာလေးတွေကို ရေးလိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သတိထားမိတာတစ်ခုက Unconditional Love ပဲ။ အဓိကဇာတ်ကောင် Mowgli ကို မွေးစားခဲ့ပြီး ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ဝံပုလွေမ Raksha ရဲ့Mowg
Dir. Abbas Kiarostami Starring: Behzad Dorani Cinematography: Mahmoud Kalari ဇာတ်ကားမှာ ဘာဆက်ဖြစ်မလဲလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ကယ်တော့ ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ခြင်းကပဲThe Wind Will Carry Us ဇာတ်ကားရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ဝန်းကျင်လောက်က ဒီဇာတ်ကားကိုစကြည့်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ ယခုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါမှ ဇာတ်ကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အကြောင်းအရာကို ပိုနားလည်လာခဲ့မိတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးဟာ ပုံရိပ်ကားခြပ်တွေနဲ့စကားပြောတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ ဇာတ်ကားအဖွင့်မှာလည်း ဖုန်တွေထ
အချစ်သည် လူတိုင်းကို နေရာတိုင်း၌ အခြေအနေရပ်မျိုစုံဖြင့် ဖြစ်တည်နိုင်သည် လို့Blue is the Warmest Color Review ရေးခဲ့တုန်းက ရေးခဲ့ဖူးသည်။ ဒီဘက်နှစ်တွေရဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှာ အချစ်ကားတွေရဲ့တင်ပြနိုင်မှုစွမ်းအားတွေ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်မှူစွမ်းရည်တွေ သိသိသာသာ ကျ လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အချစ်ကားတွေမှာ အချစ်တွေလပ်ဟင်းနေတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။ နဂိုကတည်းက စီမံထားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အချစ်ကားတွေဟာ တစ်နှစ်မှာ အရေအတွက်ပေါင်း မြောက်မြားစွာထွက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ ထိုလူနှစ်ယောက်ရဲ့မှော်ဆန်တဲ့ ဆက်နွယ်မှုတွေ ပျောက်
လူတစ်ချို့ကို ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလို့မရနိုင်ပါ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်ကြသလဲ? ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တာ တစ်ခုကတော့ သူတို့တွေကို ချစ်ပေးနိုင်တာတစ်ခုပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အကူအညီခံချင်တဲ့ လူတွေကိုပဲ ကူညီလို့ ရနိုင်ပြီး မကူညီခံချင်တဲ့ သူတွေကိုတော့ နားလည်မှုတွေပဲ ပေးစွမ်းနိုင်ကြလို့ပါပဲ။ -------------------------------------------------------------------------------- ဒီနှစ်ကြည့်ဖူးသမျှထဲမှာ Romantic အဆန်ဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားလို့ဆိုထိုက်ပေမဲ့ .... အချစ်ဆိုတဲ့
ချစ်လှစွာသော Eilis, မင်း မှတ်မိသေးလားတော့ မသိဘူး။ မင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့စတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ ညလေးကိုလေ။ ကိုယ်ဟာ Irish Club ကို တစ်ခါတစ်ရံရောက်တတ်ပေမဲ့ အဲ့ဒီ့ညတုန်းက မင်းလို မိန်းကလေးမျို းနဲ့ ဆုံဆည်းဖြစ်ခဲ့မိလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်တွေးမထားခဲ့ဘူး။ ဖူးစာပါတယ်လို့ပဲ လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် မင်းကို ကိုယ်စတွေ့ကတည်းက တစ်ချိန်မှာ မင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူသက်ထားဇနီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာလိမ့်လို့ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်တွေက ကြိုတင်သိနေခဲ့တယ်။ အဖော်တွေနဲ့ဝေးပြီး ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေတဲ့ မင်းကို အသီးသီးကနေကြတဲ့ လူတွေကြားမှာ ကိုယ်စတွေ့ခဲ့တယ်။ မင်း
ကျွန်တော့်အိပ်မက်ထဲက Mulholland Drive . (ယခုရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖူးသူများကိုသာ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားထားသောကြောင့် မြောက်မြားစွာသော Spoilers များပါဝင်သည်။) . ကိုယ့်မှာ အိပ်မက်တွေရှိတယ်။ ကိုယ်ရဲ့လက်ရှိ ကျဆုံးနေတဲ့သရုပ်မှန်ဘဝရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံရိပ်တွေဖြစ်တဲ့ အိပ်မက်တွေ။ ထိုအိပ်မက်တွေထဲမှာတော့ ကိုယ်ဟာ လူကောင်းတစ်ယောက်ပေါ့။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ကိုယ်ဘာတွေကို အိပ်မက်မက်နေမိမှာလဲ။ . 2016 ခုနှစ်ရဲ့August လ 26 ရက်နေ့မှာ BBC က ကျွန်တော်တို့21 ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် 100 ဆိုပြီးစာရင်းပြုစုခဲ့တယ်။
ဒီဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ကောင်ကို ကျွန်တော် ဝေဖန်မှာမဟုတ်ပဲ Director Luis Buñuel နဲ့ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ Jean-Claude Carrière တို့ပုံဖော်ခဲ့ကြသလိုပဲ ကိုယ်လှမ်းမြင်နိုင်တဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုကနေ ကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ ဇာတ်ကောင်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းကိုပြောတာနဲ့သွားတူလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့တင်ပြထားတဲ့ ယခုဇာတ်ကားဟာ ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကိုပဲ အပြည့်အခြေခံထားပြီး ဇာတ်ကောင်ရဲ့လုပ်ရပ်ဖန်တီးမှုတွေနဲ့အတွေးစတွေကို ပုံဖော်ထားလို့ပဲ။ . Séverine Serizy ဆိုတဲ့ အသက်ခပ်ငယ်ငယ် အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ရှင်
Clarice Starling (Silence of the Lambs) Hannible ဟာ အကောင်းဆုံး Villain တစ်ယောက်ဆိုရင် သူရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ Clarice Starling ဟာလည်း အကောင်းဆုံး Hero တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ Clarice ဟာ ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းတွင် FBI က သင်တန်းသူတစ်ယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့ပထမဆုံး အလုပ်ကတော့ Buffalo Bill ဆိုတဲ့ လူသတ်သမားတစ်ယောက်ကို ခြေရာခံလိုက်ဖို့Hannibal Lecter ဆိုတဲ့ အကျဉ်းချခံထားရသော သူသတ်သမားတစ်ဖြစ် လူသားစား စိတ်ရောဂါဆရာဝန်ဟောင်းကြီးတစ်ယောက်ကို မေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်ပြီး အကူအညီရယူခြင်းပဲ။ သူမဟာ သင်တန်းကျ
James Bond ဒီဘဲကိုတေ့ာ သူရဲကောင်းလို့မြင်မိတာထက် အားအကျဆုံး ဇာတ်ကောင်လို့ပြောရင်ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ယောကျ်ားလေးတွေ အားကျမယ်ဆိုရင်လည်း အားကျချင်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေ။ လောင်းကစားပိုင်းဆိုလည်း ကျွမ်းတယ်။ ယမကာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း သူမသိတာ မရှိ။ ကမ္ဘာ့ရန်သူတော်ကြီးတွေနဲ့တွေ့လည်း သူပဲ အမြဲအနိုင်ရတယ်။ အသက်ဘေးအန္တရယ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံလာပြီဆိုရင်လည်း ကျန်သူတွေထက် သူကအမြဲလိုလို လွတ်မြောက်တယ်။ တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရည်ကလည်း သာလွန်းတဲ့အပြင် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းကလည်း ထက်မြတ်တယ်။ တစ်ကယ်ပြောတာ။ သူမသိတာတစ်ခုမှမ
Jason Bourne သူ့အကြောင်းကိုတော့ ကျွန်တော် ဟိုတလောက ရေးသားခဲ့ဖူးတဲ့ နောက်ဆုံး Jason Bourne ဇာတ်ကား Review ထဲက စာသားတစ်ချို့ကို ယူသုံးခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျား။ 2002 လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ James Bond နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် ဇာတ်ကောင်တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်လောကမှာ ပေါလာတယ်။ နာမည်ကတော့ Jason Bourne တဲ့။ သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စတွေ့တော့ Mediterranean ပင်လယ်ထဲမှာ မျောနေတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်။ ကျောမှာလည်း သေနတ်ကျည်ပေါက်ရာ နှစ်ခုနဲ့။ ပြဿနာက သူဟာ ဘယ်ကလာပြီး ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်မသိတာပဲ။ ဒီလိုနဲ့သူတစ်ဖြည်းဖြည်းသိလာတာကတော့ သူဟာ C
Gandhi သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းက Mohandas Karamchand Gandhi ဖြစ်ပြီး2October 1869 နေ့တွင် Porbandar လို့အမည်ရတဲ့ ကမ်းရိုးတန်းမြိ ု့လေးတစ်ခုတွင် မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူဟာ နောက်ပိုင်းတွင် အမြော်အမြင် နှလုံးရည်ပြည့်ဝသူ လူတစ်ယောက်အဖြစ် ယနေ့တိုင် ကမ္ဘာ့ပေါ်က လူအများစုရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံနေရဆဲပင်။ သူဟာ India ရဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာထက် လူတန်းစားတစ်ရပ်ရဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါက ပိုမှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ သူဟာ မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သူ။ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထာ
ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်က Villains ဆိုတဲ့ Album လေး ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ လူအများစု လက်ခံကြတာကို တွေ့ခဲ့ရတော့ ပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ချက်က လူဆိုးတွေအကြောင်းရေးတာ လူဆိုးတွေလို ပြုမူနေထိုင် ဆက်ဆံဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ယခု သူရဲကောင်းတွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် ရေးလိုက်တော့တယ်။ ဒီ Album လေးအတွက် ကျွန်တော်အချိန်တော်တော်လေး ပေးခဲ့ရတယ်။ Internet က စာအချို့နဲ့အပြင်စာအုပ်တွေက စာအချို့ကိုပါ Reference လုပ်ကာ မိမိရဲ့အမြင်နဲ့ပြန်လည်ရေးသားထားတာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ တစ်ပုံခြင်းစီကို ဝင
ရုပ်ရှင်တစ်ချို့က သင့်ကိုပြုစားတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောရင် ယုံကြမလား။ A Monster Calls ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ပြီးသွားကြရင်တော့ ယုံကြည်သွားကြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ရုပ်ရှင်တွေကို ဘာကြောင့်ကြည့်ကြတာလဲ။ အပန်းဖြေချင်လို့လား။ တွေးတောချင်လို့ လား။ ခံစားချင်လို့လား။ တစ်ချို့ရုပ်ရှင်တွေက သင့်ကို ဖျော်ဖြေရေးတွေ ဆောင်ကျဉ်းလာတတ်ပြီး တစ်ချို့ရုပ်ရှင်တွေကကြပြန်တော့ သင့်ကို စဉ်းစားစရာတွေ ပေးတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ သင့်ကို ဝမ်းနည်းစရာတွေ ဝမ်းသာစရာတွေ အစရှိတဲ့ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေပြန်တယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့A Monster Call
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း (Synopsis) အမှန်တော့ ဒီအိမ်ထောင်ရေးဟာ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုတော့ မဟုတ်ဘူး။ မိမိလုပ်ကိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ အသီးသီးအောင်မြင်ခြင်းတွေကြောင့်လည်း ထုံးစံအတိုင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဝေးကွာလွန်းတယ်လို့ခံစားနေရတာ ကြာပြီ။ အမျိုးသားဖြစ်သူကတော့ သိပ်အရေးလုပ်ဟန်မတူ၊ သူ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပဲ အာရုံစိုက်နေသလို တစ်ခြားအပြင်မှာလည်း ပျော်စရာတွေ့ထားတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးလုပ်သူကတော့ မိန်းမဆိုတဲ့အတိုင်း အေးစက်စပြုလာတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်နွေးထွေးအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့အခွင့်သာတိုင်
> “Nobody's perfect. There was neveraperfect person around. You just have half-angel and half-devil in you.” ဒီဇာတ်ကားဟာ အရွယ်ရောက် လူသား ၃ ယောက်ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကို အခြေတည်ထားပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတဲ့ အမြင်တွေက ဇာတ်ကြောင်းပြောပြနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မီးကောင်ပေါက်စ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရဲ့အမြင်တွေဆီကနေပဲ။ Director Terrence Malick ပုံဖော်ခဲ့တာကလည်း ထိုမိန်းကလေးရဲ့အမြင်တွေဆီကပဲ။ . ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ ထိုအချိန်က အမေရိကားက အခြေခံလူတန်းစား အလုပ်သမားတွေကတော့ မိမိရဲ့နေ့စဉ
B E F O R E ရဲ့နိဒါန်း Vienna ကို ခုတ်မောင်းနေတဲ့ ရထားတစ်စင်းပေါ်မှာ အသက်အရွယ်အနည်းငယ်ကြီးရင့်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ German စုံတွဲတစ်တွဲ စကားများနေကြတယ်။ ဘယ်အကြောင်းအရာကို အခြေခံပြီး စကားများနေကြသလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မသိ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတော့ ဖြစ်ဟန်တူတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အငြင်းအခုန်ပွဲဟာ ရထားတွဲအတွင်းက တစ်ခြားခရီးသည်တွေကိုပါ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေတဲ့ ပြင်သစ်သူ Celine ဆိုတဲ့ မိန်းမငယ်လေးဟာ ရထားတွဲရဲ့အနောက်နားက ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ထိုင်ခုံတစ်နေရာကို ပြော
အဆောက်အဦးတွေမှာ အသက်တွေရှိတယ်ဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားရဲ့အသက်ဟာလည်း အဆောက်အဦးတွေပဲ။ . အဆောက်အဦးတိုင်းမှာ တည်ဆောက်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ်စီ ရှိတယ်။ သက်ရှိတွေ နေထိုင်ဖို့၊ လူသားတွေ စားသောက်ဖို့၊ လူသားတွေ သွားလာဖို့၊ လူသားတွေ အားလပ်ချိန်မှာ လေ့လာဖို့၊ လူသားတွေ နေမကောင်းဖြစ်ချိန်မှာ ကုသဖို့အစရှိတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ .. . သူတို့ နှစ်ယောက်စလုံးက ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိနေချိန်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဆေးစွဲနေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့အောက်မှာ နေထိုင်နေရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဝေးက
> Everyone deservesagreat love story. Call Me by Your Name ဇာတ်ကားမှာ အမှတ်ရမိတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ပြောပါဆိုရင် ဖခင်ဖြစ်သူ Mr. Perlman က သားဖြစ်သူ Elio ကို လိင်တူတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားခြင်းဆိုတာ လောကရဲ့အမှားတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းဆိုရင် ယခု Love, Simon မှာ အနှစ်သက်ဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းကတော့ မိခင်ဖြစ်သူ Emily က သူ မရဲ့သားဟာ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ သူမရဲ့သားပဲဆက်လက် ဖြစ်နေအုံးမယ်ဆိုတဲ့ အားပေး စကားပြောတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းလေးပဲ။ Simon - ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဇာတ်လမ်းကို စဖွင့်တဲ့ Monologue အရ Simon ဆ
ယခုနောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင် Genres တွေကို သေချာပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Horror ရုပ်ရှင်အချို့ရဲ့အရည်အသွေးက Action ဇာတ်ကားတွေကို သိသိသာသာ ကျော်တက်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်နှစ်သက်မိတဲ့ Horror တွေကတော့ တစ်နှစ်ကို များများစားစားတော့ ထွက်လာတာ မတွေ့ရဘူး။ အလွန်ဆုံးရှိလှ ၃ ကားလောက်ပဲ။ အခုပြောမဲ့ A Quiet Place ဇာတ်ကားဟာလည်း အရည်အသွေး အပြည့်အဝနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးခုန်သံကို မြန်အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ . ယခုရုပ်ရှင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကြောတွေကို အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာ ကွဲအက်စေလောက်တဲ့အထိ ဂရ
Manila in the Claws of Light ကို 1978 ခုနှစ်တုန်းက Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြတော့ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေက ဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့ “Dirty Movie” တဲ့။ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ဘဝညစ်တေးမှုတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်က စိတ်ဓာတ်ညစ်ညမ်းမှုတွေကို အကောင်းဆုံးသရုပ်ဖော်နိုင်ခဲ့လို့သုံးခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဇာတ်ကောင်တွေဟာ အလုပ်လက်မဲ့တွေ၊ ဒုစရိုက်သမားတွေ၊ ရာဇဝတ်သားတွေ၊ အိမ်ခြေယာမဲ့တွေ၊ လိင်အလုပ်သမားတွေ အစရှိသည်ဖြင့် ထိုခေတ်က Philippines နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအကျဆုံး လူသားတွေရဲ့ဘဝတွေကို ဖော်ပြထားနိုင်ခဲ့တယ်။ -----------------
*Spoilers များ ပါဝင်သည်။ Martin Scorsese လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေရဲ့အတွေးတွေထဲ စဝင်လာတာက Gangsters ရုပ်ရှင်တွေ၊ Violence တွေအသားပေးရိုက်တဲ့ Director ကြီးဆိုတဲ့ အပေါ်ယံအတွေးပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း Martin Scorsese ရဲ့ Career ကိုသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Historical dramas ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဟာ အောင်မြင်မှုအလွန်နည်းပါးခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ခပ်ဝေးဝေး မကြည့်နဲ့။ 2016 တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Silence ကို ကြည့်ရင်တောင် သိနိုင်တယ်။ Silence (2016) က သူ့အရှေ့က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ The Departed (2016) တို့၊ Wolf of
The Life of Oharu ကို Director ကြီး Kenji Mizoguchi ရိုက်ကူးခဲ့တုန်းက သူ့အသက် 54 နှစ်ရှိနေပြီ။ ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်ခဲ့တာလည်း ဆယ်စုနှစ်သုံးစုနီးပါး ရှိနေခဲ့ပြီ။ ဒါပေမဲ့ Japanese လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ရှင်သန်နေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကို 1952 ခုနှစ်မှာ သူဖန်တီးခဲ့တယ်။ သူထိုရုပ်ရှင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ခေတ်ကာလတစ်ခုကို အခြေပြုထားခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတော့ မဟုတ်ဘူး။ 17 ရာစုဝန်းကျင်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကို သူရင်နာဖွယ် တင်ပြခဲ့တယ်။ ထိုအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကတော့ Oharu ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာ
My Favourite Movie Quotes (Part I)
My Favourite Movie Quotes (Part II)